Sandisk UItra USB 3.0, waxaan tijaabinay qalabka cusub ee Sandisk flash drive | War gadget
Sandisk UItra USB 3.0, waxaan tijaabinay qalabka cusub ee flash-ka ee Sandisk
Xavi Carrasco | | La cusboonaysiiyay 17/02/2020 14:20 | Qalabka, Reviews
SanDisk waa mid ka mid ah kuwa culus ee ku dhaca warshadaha xusuusta flash-ka. Adduunyada ay xalalka ku-meel-gaadhka ah ee daruuriga ahi xawli ku sii kordhayaan, SanDisk waxay haysaa qaddarka iyadoo la siinayo qalab aan tayo lahayn. Iyo SanDisk Ultra USB 3.0 ma noqon doono mid ka reeban.
Waxaan horeyba kuugu sheegi karaa kadib markaan dhammeystiro Dib u eegista SanDisk Ultra USB 3.0 Gabagabeynteydu waa mid aad u cad: haddii aad raadineyso USB awood leh oo waara, xusuusta flash-ka ee SanDisk cusub ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee laga fiirsado.
1 SanDisk Ultra USB 3.0, naqshad soo jiidasho leh oo la maareyn karo
2 SanDisk SecureAccess, waa barnaamij raaxo leh oo dareen leh si loo ilaaliyo macluumaadkaaga
3 SanDisk Ultra USB 3.0 wuxuu ku gudbiyaa xogta xawaare aan la qiyaasi karin
SanDisk Ultra USB 3.0, naqshad soo jiidasho leh oo la maareyn karo
Waxaan ku bilaabi doonnaa ka hadalka qaabeynta SanDisk Ultra USB 3.0. Qiyaasaha 56,8 mm x 21,3 mm x 10,8 mm waxaan ku aragnaa a qalab raaxo leh oo anfacaya. In kasta oo laga sameeyay balaastik, taabashada ayaa ku wanaagsan gacanta.
Hal ikhtiyaar oo aan runtii ka helay ayaa ah suurtogalnimada in la qariyo isku xiraha USB-ga si loo badbaadiyo booska. Faahfaahin aan ku qanco. Sidoo kale dhabarka waxaa ku yaal dalool haddii aan rabno inaan dhigno USB-ka, oo ku habboon inaan lumin shaqada. Sidoo kale dusha sare ee SanDisk Ultra USB 3.0 kooxda naqshadeynta waxay dhigteen LED yar oo buluug ah oo tilmaamaya in qalabku shaqeynayo.
Gaaban, USB leh dhammeyn wanaagsan, Naqshad wacan oo leh khadad wareegsan oo ka badan moodooyinka aan u barannay. Ma jiraan wax laga diidayo arrintan
SanDisk SecureAccess, waa barnaamij raaxo leh oo dareen leh si loo ilaaliyo macluumaadkaaga
Markii aan isku xireynay SanDisk Ultra USB 3.0 markii ugu horreysay, waxaan la kulannay wax lala yaabo: USB-ga cusub ee soo-saaraha waxaa ku jira barnaamijkiisa amniga. Hadana waan kuu sheegayaa taa SanDisk SecureAccess waa mid ka mid ah xalka ugu fiican haddii aad rabto inaad ilaaliso faylasha ku jira xusuustaada flash-ka.
Marka ugu horreysa ee aan dooneyno inaan adeegsanno barnaamijka waxqabad ee xooggan ee SanDisk, waa inaan marka hore cusbooneysiinno Sida ugu fudud ee gujinaya astaanta dalabka oo aad raacdo talaabooyinka aad u aadeyso SanDisk SecureAccess nooca V3.0. Hadda oo la cusbooneysiiyay arjiga, waxaan kaliya ku qasbanaan doonnaa inaan ku riixno oo aan aqbalno shuruudaha isticmaalka. Markaan raacno talaabooyinkan, daaqad ayaa u muuqan doonta sida tan aan kugu muujiyo xariiqyadan.
Waxaan kaliya u baahanahay inaan ku buuxino meelaha banaan lambarka sirta ah ee aan isticmaali doonno si aan uqarinno galkayaga oo aan gujino OK. Haddii aad eegto bidixda hoose, waad arki doontaa taas Waxaad u dooran kartaa ikhtiyaarro kala duwan lambarka sirta ah, taas oo ka dhigaysa mid aad u ammaan badan. Haddii aad hubiso xulashooyinkaan oo aadan u isticmaalin halbeegyada loo baahan yahay si aad u abuurto lambarkaaga sirta ah (isticmaalka xarfaha waaweyn iyo jilayaasha gaarka ah) ma awoodi doontid inaad abuurto galkaaga sirta ah.
Daaqada xigta mar hore ayey muujineysaa galkaaga sirku. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad jiido faylasha aad rabto inaad kaydiso oo aad diyaarsato. Kadib xidhitaanka iyo furitaanka barnaamijka, SanDisk SecureAccess wuxuu na waydiin doonaa lambarka sirta ah ee lagu galo faylasha.
Barnaamijka SanDisk Miyuu Dhab Amaan Yahay? Haddii aan tixgelinno SanDisk SecureAccess wuxuu adeegsadaa sirta A-128-bit, Waxaan horeyba kuugu sheegayaa in badqabka xogta uu dhameystiranyahay. Intaas waxaa sii dheer, gudbinta xogta galka sirta ah weli waa sida ugu dhakhsaha badan.
SanDisk Ultra USB 3.0 wuxuu ku gudbiyaa xogta xawaare aan la qiyaasi karin
Waayahay, waxaan aragnay in SanDisk Ultra USB 3.0 uu leeyahay naqshad soo jiidasho leh, isku dhafan softiweer aad u xiiso badan, laakiin ka waran gudbinta xogta? Si fudud farxad. Markaad ku tijaabineyso USB-ga caadiga ah farqiga udhaxeeya waa eber, laakiin Markii aan ku xirno SanDisk Ultra USB 3.0 dekedda USB 3.0, isbeddelka ayaa ka sii cajaa'ib badan.
Waxaan sameynay labo tijaabo, tan ugu horeysa waxay soo gudbineysaa fiidiyowyo taxane ah oo wadartoodu dhantahay 16 GB. The celceliska xawaaraha wareejinta wuxuu ahaa 130 MB / s, ku gudbinaya dhammaan xogta in ka badan laba daqiiqo. Markaad isticmaaleyso feylasha yaryar xawaaraha wareejinta wuu xadidan yahay, in kastoo waligiis kama hooseeyo 100 MB / s, oo bixiya waxqabad aad u fiican. Nabadgelyo inaad sugto ku dhowaad 20 daqiiqo inaad 20 GB ugu wareejiso USB-gaaga!
SanDisk waxay shaqo fiican ka qabatay SanDisk Ultra USB 3.0, Shaki kuma jiro. Haddii aan sidoo kale ku darno in soo-saaruhu uu bixiyo dammaanad 5-sano ah, waxaan horteenna ku haynaa xalka ugu fiican haddii aad raadineyso USB bixiya waxqabad wanaagsan iyo nolol waxtar leh oo u qalma.
SanDisk Ultra USB 3.0 waxaa lagu heli karaa noocyo kala duwan 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, iyo 256GB awooda. Waxaan tijaabinay qaabka 256GB, oo ku habboon dadka isticmaala ee doonaya inay ku heystaan ​​darawal yar oo adag oo la qaadan karo jeebkooda. Oo hadaan xisaabta ku darsanno taas qaabkan 256 GB ma gaarayo 100 eurowaxay cadeynaysaa sababta SanDisk uu boqorka ugu yahay warshadaha.
Dib u eegida: Xavi Carrasco
Naqshad wanaagsan oo raaxo leh in la xidho
SanDisk Ultra USB 3.0 wuxuu leeyahay dammaanad 5 sano ah
Qiimuhu ma xuma, laakiin dadka isticmaala qaarkood ayaa ka doorbidi doona hal TB adag oo ka badan qiimaha 256 GB USB Flash ah, in kastoo aan xusuusanno kala duwanaanshaha cabirka
Adigana, maxaad u malaynaysaa SanDisk Ultra USB 3.0 cusub? Ma kula tahay inay tahay xusuusta USB ugu fiican suuqa?
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Kumbuyuutarro » Qalabka » Sandisk UItra USB 3.0, waxaan tijaabinay qalabka cusub ee flash-ka ee Sandisk
Ciyaaraha fiidiyowga ee la sii daayo bisha Nofeembar 2015
TP-Link AC750, ma jiraan wax dhibaato ah oo ka imanaya xagga gurigaaga.